को’रोना उपचारमा खटिनुभएकी गर्भवती नर्सको पिर ,व्यथा, नेपालको चिन्ताले सताउँछ ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/को’रोना उपचारमा खटिनुभएकी गर्भवती नर्सको पिर ,व्यथा, नेपालको चिन्ताले सताउँछ !
को’रोना भा’इरस रो’गको म’हामारी विश्वका २ सय १३ वटा देशमा फैलिसकेको छ । अमेरिकामा को’रोनाबाट भएको नि’धन र सं’क्रमण दुबै उच्च छ । अमेरिकापछि इटाली र स्पेनमा मानवीय क्ष’ति अधिक छ । अहिलेको समयमा चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक लगायतका स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगीहरु आफूलाई जोखिममा राखेर सं’क्रमितलाई बचाउन लागि परिरहेका छन् । उनीहरुको त्याग र पेशाप्रतिको समर्पणको जति प्रशंसा गरे पनि थोरै नै हुन्छ ।
सं’क्रमण फैलिएका धेरैजसो देशहरुमा नेपाली चिकित्सक, नर्सहरु कार्यरत छन् र बर्तमान विषम परिस्थितिमा आफ्नो पेशामा समर्पित भई डटेर अग्रस्थानमा रही को’रोना सं’क्रमितहरुको उपचारमा लागिरहेका छन् । अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै संक्रमितको मृत्यु देख्नु त उनीहरुको दैनिकी जस्तै भइसक्यो । पछिल्लो समय तिब्र सं’क्रमण देखिएको देशमा बेलायत पर्दछ । हेल्थपाटी डटकमका लागि तुलसा घिमिरेले बेलायतमा को’रोनाका बि’रामीको उपचार गरिरहेकामध्ये दुई जना नेपाली नर्ससँग कुरा गरि लेख्नुभएको उहाँहरुको अनुभव :
मेरो घर नयाँ बानेश्वर हो । नेपाल छँदा ट्रमा सेन्टर र मध्यपुर अस्पतालमा काम गरेँ । म बेलायत आएको ४ वर्ष भयो यहाँ नर्थवीक पार्क हस्पिटलमा कार्यरत छु । केहि हप्ता अघिसम्म अस्पताल जाँदा अनुहारमा हाँसो लिएर जान्थेँ, म बि’रामीसँग कुरा गर्थेँ उनीहरुको पी’डासँगै बसेर कम गर्न कोशिस गर्थेँ तर अहिले बि’रामीले नै नचिन्ने रुपमा बि’रामी माझ जानुपर्छ । न बिरामीसँग धेरैबेर बस्न पाइन्छ न उनीहरुसँग बोल्न नै पाइन्छ ।
बि’रामीले हामीलाई चिन्दैनन् उनीहरुको नजिक जाँदा पीपीई लगाएर जान्छौँ । उनीहरुलाई हामीले नै औषधि खुवाउने हो । दी’र्घ रो’गी हुनुहुन्छ भने उनीहरुलाई उच्च निगरानीमा राख्नुपर्दछ । दिनको कम्तिमा ६ जना को’रोनाका बि’रामीको हेरचाह गर्नुपर्छ । साढे १२ घण्टा त खट्नैपर्छ । आफू सुरक्षित भई आत्मविश्वास बढाई बि’रामीको कक्ष जाने गर्छु ।
म ५ महिनाकी गर्भवती हुँ : पीपीई लगाउदै गर्दा म सोच्ने गर्छु मेरो अहिलेको प्राथमिकता के हो ? म अहिले ५ महिनाकी गर्भवती छु अहिले के जरुरी हो जस्ता अनेकाैँ प्रश्नले घेर्ने गर्छ तर म त्यही बि’रामी छ’टपटिरहेको, आफन्तले भेट्न नपाउँदाको पी’डालाई देख्छु र सम्झन्छु मेरो कर्तव्य बि’रामीको सेवा गर्नु नै हाे । यतिबेला आफू सुरक्षित भएर बि’रामीको सेवा गर्नुनै आफ्नो धर्म हो र अरु स्वास्थ्यकर्मीले पनि यो कुरालाई मनन गरिरहनु भएको छ । बि’रामीलाई हेरेर पीपीई खोल्ने बेला शरीरभरी पसिना नै हुन्छ । पीपीइ लगाउन र लगाइसकेपछि खोल्दा हुने सानो गल्तिले पनि सं’क्रमण हुने सम्भावना उच्च हुने भएकाले हामीले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मास्क खोल्दा अनुहारमा ग’हिरो दा’ग बस्छ तर यो दा’गलाई बि’रामीको सम्झनाले मेटिदिन्छ ।
आफन्तले भेट्न पाउँदैनन्, बि’रामी न्याउरिन्छन् : यसअघि म स्ट्रोक युनिटमा काम गर्थेँ तर अहिले अस्पतालहरुमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अरु रो’गका बि’रामीहरु आउँदैनन् । को’रोनाका बि’रामीले बे’डहरु भरिन्छन् । बि’रामीलाई धेरै गाहो भयो भने मात्र विशेष उपचारका लागि अर्काे वार्डमा सारिन्छ । आफन्तले बि’रामी भेट्न पाउँदैनन्, मृ’त्यु भइहालेमा छुन पाउँदैनन् त्यो समय एकदमै नराम्रो लाग्छ ।
नेपालको याद आउँछ, पीर लाग्छ : यो रो’ग विश्वकै लागि नयाँ छ । उमेर, वर्ग, समुदायलाई हेर्दैन । त्यसैले अरु बेलामा जस्तै आत्मबल बढाएमा समयमा नै निको हुन्छ । मेरो श्रीमानलाई को’रोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि नमुना परीक्षण गरिएकोमा नेगेटिभ आयो । हामी कत्ति पनि आ’त्तिएनौ आइसोलेसनमा छुट्टै बस्यौ ।
नेपालमा पनि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनलाई विशेष जोड दिनुपर्छ नागरिकले पनि बुझ्न जरुरी छ । आफूलाई लक्षणहरु देखिए लुकाउन हुँदैन । सरकारले अस्थायी को’रोना अस्पतालको निर्माण गर्नुपर्छ, पीपीइको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ, अक्सिजन भेन्टिलेटर निकै महत्वपूर्ण छ यसको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सकेसम्म अन्य बि’रामी र को’रोना बि’रामी एकै अस्पतालमा राख्नुहुँदैन ।
म बेलायत आएको १३ वर्ष भयो तर मैले यहाँ नर्सिङ पेशामा आवद्ध भएको ४ वर्ष मात्रै भयो । घर चितवन हो । नेपालमा सन् १९९६ मा नर्सिङ पास गरेकी हुँ । लुटन र डन्स्टेबल विश्वविद्यालय अस्पतालमा कार्यरत छु । को’रोनाको म”हामारी सुरु हुनु अगाडि म इण्डोस्कोपी विभागमा थिएँ तर अहिले म कार्यरत अस्पतालमा पनि को’रोनाका बि’रामीहरु अधिक हुने भएकाले मैले पनि वार्डमा को’रोनाका बि’रामीको उपचार गर्नुपर्छ ।
बि’रामी बोल्नै सक्दैनन्, खाना खुवाउनुपर्छ: मेरो वार्डमा विशेषगरि युवा उमेरका सं’क्रमितहरु हुन्छन् तर कहिलेकाहीँ बृद्द बृद्दाहरु पनि हुन्छन् । मैले बि’रामीहरुलाई औषधि खुवाउने, खाना खुवाउने तथा बेड मिलाउने गर्नुपर्छ । मेरो वार्डमा सं’क्रमितहरु बोल्नै नसक्ने अवस्थामा आइपुग्छन् तर अवस्था सामान्य हुन्छ । धेरै गाह्राे भएमा आइसीयूमा लगिन्छ ।
बि’रामीहरु बोल्न खोजिरहेका हुन्छन् तर आवाज नै आउँदैन । आफू सुरक्षित भई पीपीई लगाएर बिरामीको अवस्था हेर्नेगर्छु । अरु बेला अस्पतालमा बि’रामीका आफन्तहरु आउनेजाने चलिरहन्थ्यो एक आपसमा आत्मबल बढ्थ्यो तर अहिले त आफन्तले भेट्न मिल्दैन । आफन्तहरु रुँदै सिसैबाट भए पनि हेर्न पाइन्छ कि भनेर आउँछन् तर मिल्दैन । त्यतिबेला म एकदम दुखी हुन्छु । उनीहरुको पी’डा मैले बुझेको हुन्छु सारै पीडा हुन्छ मलाई पनि । पीपीई नलगाई बि’रामीको कक्ष जान हुँदैन र गएपछि त्यहाँ धेरैबेर वस्न पनि हुँदैन ।
भन्ने बित्तिकै वि’रामीको नजिक जान पाइँदैन : हामी पनि बाहिर सिसाबाटै नै निगरानी गरिरहन्छौँ । गाह्राे भएको थाहा पाइए पनि भन्ने बित्तिकै भित्र छिर्न मिल्दैन । बि’रामीलाई सकस भइरहेको हुन्छ पीपीईको अभाव यहाँ पनि छ । पीपीइए नभएको बेला भन्ने बित्तिकै छिर्न मिल्दैन र भएको खण्डमा केही समय पीपीई लगाउँदा जान्छ । अरु बेलामा जस्तो हत्तपत्त बि’रामीको उद्दार गरिहाल्ने अवस्था छैन । किनकी आफू सुरक्षित रहन पीपीई लगाउनै पर्छ । दिनमा कम्तिमा ५–७ पटक बि’रामीको अवस्था बुझ्न जानुपर्छ । यहाँ पनि पीपीइको अभाव छ तर आवश्यकता र अवस्था हेरेर पीपीइको प्रयोग गर्ने गर्छु ।
घरमा आइसोलेसनमा बस्छु : तीन हप्ता जति भयो म घरमा छुट्टै बसिरहेकी छु । निकै गर्व महसुस गरिरहेको छु यस्तो कठिन समयमा बि’रामीको सेवा गर्न पाएको छु । वि’रामीको पी’डालाई नजिकैबाट नियाल्ने मौका पाएको छु । आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छु उच्च मनोबलका साथ बिरामीको उपचारमा खटिएको छु । मनलाई शान्त पार्न भागवत् पढ्ने गर्छु ।
अस्पतालको माहौलले निकै त’नाव बनाएको हुन्छ । घरमा आएपछि आफूलाई शान्त पार्न भागवत् गीता पढ्ने गर्छु, योग ध्यान बस्ने गर्छु अनलाइन प्रवचन सुन्छु, सकारात्मक सोचाइ बढ्ने भिडियोहरु हेर्ने गर्छु । हार्माेनियम बजाउँछु र त्यसै मार्फत शोकाकुल परिवारमा शान्तिको सन्देश पठाउँछु । यसो गर्दा म आफै भावुक हुन्छु तर आफ्नो कर्तव्य वहन गर्नैपर्छ । फेरि म अर्काे युद्धमा तयार हुन्छु जहाँ दिमाग, हृदय र हातले एकैसाथ काम गर्छन् । कहिलेकाहीँ करुणाले जित्ने कोशिश गर्छु तर विवेकले त्यसलाई समात्ने प्रयत्न गर्छु । अवस्था गम्भीर छ को’रोनाको ल’डाइँ जित्छौँ भन्ने आत्मविश्वास लिएकी छु ।
बेलायतमा को’रोना सं’क्रमणबाट मृ’त्यु हुनेको संख्या पछिल्लो २४ घण्टामा १२ हजार १ सय ७ सय ७८ जनाको नि’धन भयो । यो सँगै मंगलबार बेलुकासम्म बेलायतमा नि’धन हुनेको संख्या १२ हजार १ सय ७ पुगेको छ भन ९३ हजार ८ सय ७३ जनामा सं’क्रमणको पुष्टि भएको छ ।
हिजो गएको पहिरो मा ९ जाना को परिवार हराएको छ|